‘विकास बैंकहरुले १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्’ - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
‘विकास बैंकहरुले १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्’
प्रकाशित मिति : बुधबार, अशोज १, २०७१
अपांगता पुनस्र्थापना तथा विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत क्रियाशिल रहेका लोकनाथ भुसाल भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड बुटवलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । स्थापनाकालदेखि नै बैंकको कार्यकारी भएर काम गरेका भुसालसँग वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । बैंकले स्थापनाको १० औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बैंक र नेपालको बैंकिङ अवस्थाका बारेमा जिष्टखबरको कुराकानी :
बैंकको १० बर्षे यात्रामा के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल भए ?
हुन त बैंकले हरेक वर्ष साधारण सभामा बार्षिक प्रगतिका सूचांकहरु सार्वजनिक गर्दै आएका हुन्छन् । तथापि एकमुष्ट १० वर्षको प्रगतिको कुरा गर्दा २०६१ सालमा एउटा कार्यालय, एक करोड ५० लाखको पूँजी र पाँच जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकले १० वर्षको अवधिमा ५२ करोड पूँजी, २० वटा कार्यालय, दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी, पाँच अर्ब निक्षेप, चार अर्ब कर्जा प्रवाह गरि शेयर धनीहरुलाइ १५ प्रतिशत देखि २३ प्रतिशतसम्म हरेक वर्ष लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । सुरुको वर्षमा चार लाख ७१ हजार कर तिरेको बैंक अहिले सात करोड ३१ लाख कर तिर्न सक्ने भैसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको प्रतिष्पर्धालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मुलुकमा रहेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये क र ख वर्गका बैंकहरुको कार्य प्रकृति १÷२ वटा विषयहरु बाहेक करिव एकनासकै देखिन्छ । अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न प्रभावले तरलतामा तलमाथि हुने, ब्याजदर फेरबदल हुने, कर्जाको मागमा घटबढ हुने भैरहन्छ । बैंकका सबै वर्गका शाखा संजालका करिव ३४ सय ३० भन्दा बढी स्थानबाट बित्तिय सेवा प्रदान भैरहेको छ भने २३ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरुले पनि सेवा दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्पर्धा छैन भन्ने होईन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धाले सेवाग्राहीलाई लाभ हुन्छ भने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले संस्था धरासायी हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा बैंकहरुमा तरलता बढी भएकाले कतिपय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदरका कारणबाट एक संस्थाको कर्जा अर्को संस्थाले तान्ने प्रतिष्पर्धा पनि नदेखिएको होईन । ग्राहकहरुले कर्जाको ब्याजमा बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन्, व्यावसायिक दक्षता भएका ग्राहकहरुमा यस्तो प्रवृति देखिएको छ । विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुले सरह ९÷१० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् भने बचतमा सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । तथापी विकास बैंकहरुमा निक्षेपको साथसाथै कर्जा पनी बढिरहेको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । तसर्थ मलाई त्यति ठूलो प्रतिष्पर्धा भए जस्तो लाग्दैन ।
वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भईरहेका अवस्थामा यहाँहरुको मर्जर सम्बन्धी योजना केहि छ ?
हाम्रो बैंकको हकमा हतारमा मर्ज गरिहाल्नु अवस्था छैन । १० जिल्लाको विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २० करोड चुक्ता पूँजी तोकेको छ, जवकी हाम्रो चुक्ता पूँजी अहिले ५२ करोड छ । हामीले ३ः१ का दरले हकप्रद शेयर निष्कासन प्रकृया सुरु गरेका छौं । यसबाट १४ करोड भन्दा बढी पूँजी संकलन हुन्छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई तोकेको पूँजी ६४ करोड भन्दा बढी हो हाम्रो चाँडै नै ६६ करोड पुग्दैछ । पूंजीगत आधार र अन्य सुचांकका आधारमा यो बैंक सुदृढ छ, तथापी उपयुक्त संस्था देखिएमा मर्जरलाई खुल्ला राखिएको छ । मर्जर, कमजोर वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र नभएर सक्षम संस्थाहरुलाई अझ बढी सक्षम बन्न र कमजोरले सक्षम बन्नका लागि उपयोग गर्न सक्ने एउटा अवसर हो । वित्तीय संस्था मर्जर एक अति आवश्यक र नितान्त व्यावसायीक रणनीति हो भन्ने तर्फ हामी सजग छौं ।
नेपालको आर्थिक विकासमा विकास बैंकहरुको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मुलुकमा बंैकिङ चेतना जगाउनेदेखि ग्रामिण जनतामाझ बंैकिङ सेवाकोे बानी बसाल्नमा विकास बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । २०÷२५ वर्ष पहिले मुलुकमा ३÷४ वटा मात्र बैंक थिए, ती बैंकहरु पनि शहर केन्द्रीत थिए । सामान्य नागरीकको बैंकमा पहुँच थिएन, जव विभिन्न जिल्लाहरुमा विकास बैंकहरु खुले तत्पश्चात ती बैंकहरुले विभिन्न ग्रामिण स्थानमा आधुनिक बैंकिङ सेवा घर दैलोमा पु¥याउने काम गरे । ती बैंकहरुकाकारण विपन्न, साना कृषक तथा उद्यमीहरुले सहजै सुपथ मुल्यमा ऋण सुविधा पाएका छन् । बचतकर्ताहरुले पनि बचत सुरक्षित राख्न पाएका छन् । विकास बैंकहरुले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । मुलुकभित्रका ८६ वटा विकास बैंकले १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । सरकारलाई करोडांै राजस्व बुझाएका छन् । दुई खर्ब निक्षेप संकलन र एक खर्ब ६२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसमध्ये सात अर्बभन्दा बढी विपन्न वर्ग र क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । विकास बैंकहरुलाई अलग्गै मापदण्ड लागू गरि परिचालन गरिएमा मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्नेछ ।